Okpu okpu baseball
Beanies & okpu okpu
Okpukpo ụmụaka & okpu ụmụaka
Okpu ajị anụ polar
Okpu gwongworo & okpu ntupu
2021 HAT Ọganihu ỌHỤRỤ ỌH
Uru anyị 1. Ọmarịcha mma, ọnụ ahịa asọmpi, servce kacha mma na nnyefe ozugbo. 2. Enwere ike ime agba, Materical, Shape, Style wdg. 3. Anyị nwere ike ịme nlele mbupu na nlele ọhụrụ dị ka ndị ahịa chọrọ. Nkọwa maka onye ọkụ azụ okpu okpu okpu, okpu ịwụ, okpu okpu ahịhịa floppy: ...
Onye na -emepụta okpu na -ewebata gị ka ịkpụ usoro nhazi akara okpu
Ụkpụrụ logo dị na okpu bụ ihe ejiji dị oke mkpa na okpu. Ọtụtụ okpu nwere akara n'ihu. Mgbe anyị na -emetụ okpu aka, anyị ga -achọpụta na ụzọ nhazi akara na okpu dị iche. Taa, m ga -ewebata ụzọ nhazi akara okpu. N'oge a, okpu nkịtị ...
Ememe Mba na Septemba
Septemba 2 Vietnam-Ụbọchị nnwere onwe Septemba 2 bụ Ụbọchị Mba nke Vietnam kwa afọ, Vietnam bụ ezumike mba. Na Septemba 2, 1945, Onye isi ala Ho Chi Minh, onye ọsụ ụzọ mgbanwe Vietnam, gụrụ “Nkwupụta nnwere onwe” Vietnam ebe a, na -ekwupụta esta ...
Ememe Mba n'August
Ọgọstụ 1: Ụbọchị Mba Switzerland Kemgbe 1891, a họpụtara Ọgọst 1 nke afọ ọ bụla ka ụbọchị mba Switzerland. Ọ na -echeta njikọta nke mpaghara obodo atọ nke Switzerland (Uri, Schwyz na Niwalden). Na 1291, ha hibere “njikọ aka na -adịgide adịgide” iji jikọta aka iguzogide mwakpo mba ọzọ ....
Ọhụrụ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ zuru ụwa ọnụ
10. Onu ogugu Mexico: nde 140.76 Mexico bụ mba gọọmentị etiti na North America, na -ebute ọkwa nke ise na Amerika na nke iri na anọ n'ime ụwa. Ọ bụ ugbu a bụ obodo iri kachasị ama ama n'ụwa na mba nke abụọ kachasị na Latin America. Onu ogugu onu ogugu ndi mmadu di iche iche ...
Ọdịiche nke DDP, DDU, DAP
A na -ejikarị okwu azụmaahịa abụọ DDP na DDU na mbubata na mbupụ ngwongwo, na ọtụtụ ndị na -ebubata ya enweghị nghọta miri emi banyere usoro azụmaahịa ndị a, yabụ na ha na -ezutekarị ihe ụfọdụ na -adịghị mkpa na usoro mbupụ ngwaahịa. nsogbu. Yabụ, kedu ihe DDP na DDU, na kedu ihe dị iche ...
Ememe Mba na June
June 1: Germany-Pentikọst A makwaara dị ka Mmụọ Nsọ Mọnde ma ọ bụ Pentikọst, ọ na-echeta ụbọchị 50 mgbe a kpọlitere Jizọs n'ọnwụ wee zite Mmụọ Nsọ n'ụwa ka ndị na-eso ụzọ kerịta ozi ọma. N'ụbọchị a, Germany ga -enwe ụdị mmemme dị iche iche, ofufe na mpụga ...
NDỤMỌDỤ n'efu +8613643317206
ADDRES NO.178, SHENGLI NETTH STREET, SHIJIAZHUANG, HEBEI, CHINA
Ozi ịntanetị jennifer@wangjietextile.com